Sammubani, Author at Ibsaa Jireenyaa - Page 70 of 73
Daandiin Haqaa kami laata?-kutaa 1ffaa
July 9, 2016 Sammubani Leave a comment
Dhalli nama ka’uumsa tokko irraa ka’ee gahuumsa isaa gahuuf daandii irra adeemu qaba. Daandiin irra deemu kun tarii waan gaarii fi milkaa’innatti isa geessa yookiin immoo badii fi kufaatitti isa geessa. Kanaafu dhalli nama daandii lama irra adeemaa jira jechuudha. Tokkoffaan daandii milkaa’inna fi gammachutti isa geessu, lamaffaan immoo daandii kufaati fi baditti isa geessudha. Read more
July 2, 2016 Sammubani One comment
Yeroo darbee keessatti waa’ee hamaa fi jette jette ilaalchise irratti mari’achuun keenya ni yaadatama. Yeroo baay’ee hamni miidhaa baay’ee akka geessu hubanne irraa fagaachuf hin carraaqnu. İnuma akka madda gammachuutti fudhanna. Namoota lakkoofsa isaani baay’ee xiqqaatu hojii fafee kana irraa fagaata. Hama ittisuuf tarkaanfiwwan fudhachuu qabnu maal fa’aa?
1.Cimanii hojjachuu- Hojii malee taa’un hundee badiiti fi dhiphinnaati. Sammuun hojii gaarii hojjatee of bashanansiisu barbaada. Garuu yoo hojii dhabee akka ibiddaa of gubee fixa,ni cinqama. Read more
Qorsa Jaalalaa-Kutaa 1ffaa
June 25, 2016 Sammubani 5 comments
Yeroo darban keessa baruulee jaalala barreessun keenya ni yaadatama. Barrulee kanniin keessatti hiika jalaala waliin mari’achuuf yaalle turre. Jaalalli fayyaas dhiibes. Yoo obbolaa lamaan ykn haadha fi abbaa manaa jiddu jaalalli dhugaa uumame walitti nyakkisuu,wal jibbuu,wal waanyu,wal sobuu fi kkf jidduu isaaniti ni ka’a. Sababa jaalalaatin walitti dhufeenya namoota lamaani ni cima. Qaroomini sababa jaalalaatin ijjaarrama. Tokkumaan hawaasaa kan ijjaaramu jaalalaani. Bakka jaalalli hin jirretti qaroominni,obbolummaan,tokkummaan jiraachu hin danda’an. Read more
June 25, 2016 Sammubani One comment
Jette jettee (namiimah)
Akkuma kutaa darbee keessatti ilaalu yaalletti jette- jette jechuun namni tokko namoota walitti naquu fi oduu baadhachuun hariiroo isaani balleessuf yommuu adeemudha, hariiroon isaani gaarii fi gammachiisaa ta’ee osoo jiru. Dhugumatti amalli gadheen akkanaa hawaasa keenya garmalee miidhaa kan jiruudha. Haalli namoota lama yookiin garee gaarii taanan jette jette itti fiduun karaa adda addaan isaan diigu barbaada. Niiti fi dhiirsi walitti tollaan waanyoon hanga isaan addaan baastu hirriba hin qabdu. Jette jettee itti guurun isaan addaan bittineessite. Read more
Hamni dhibee hamaa hawaasa kamuu huuba jiruudha. Badiwwan arrabaan dhufan keessa hamni iddoo ol’aana qabata.hamni miidha fi rakkoo hangana hin jedhamne geessa. Mee duraan dursine hamni maal akka ta’e haa ilaallu. Hiikkan isaa maalidha? Hiika isaa yoo hin beekin fi hin hubatin adabbii fi miidha inni fidu irraa baraaramu hin dandeenyu. Read more
Arrabni foon diimtu baay’ee laaftu, akka feete sochuuti fi dubbiif bu’uura tan taatedha. Arrabni meeshaa dubbiti. Arrabaan ala jechoota sagaleen baasun ni ulfaata. Haasofti arrabaan uumamu nama dubbatu irratti hundaa’e gariin isaani gaarii, gariin isaani immoo badaadha. Waa’ee badii arrabaa ilaalchise wanti baay’ee jedhame, wanti baay’een barreefame garuu dubbii fi barreefamonni sunniin hundii badii arraba keenya dhowwuu danda’aniiru? Eeti badii arraba keenya barreefamni yookiin dubbii namoota biraa kan dhowwuu osoo hin ta’iin matama keenyatu badii arrabaa dhowwuu qaba, matama keenyan arraba keenya lugaamu danda’a. Read more
Duraan durse barattoota qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa fudhataniif hamileen keessan hin cabin, carraaqin keessan akkanumatti kan hafu hin ta’in isiniin jedha. Qormaata jechuun hangam ati jabaa akka taate si qoruuf kan sitti dhufuudha. Qormaanni kan waraqaa irratti qoramnu qofa osoo hin ta’in jireenyu mataan ishii qormaata guddaadha. Ilmi namaa qormaata adda addaa keessa darbee bakka tokko gaha. Osoo qormaanni jireetu baate silaa badaa fi gaariin addaan hin foo’aman, jabaa fi laafan addaan hin bahan. Kanaafu qormaanni kan nutti dhufuuf nu jabeessufi. Read more
Ramadaanni akka lakkoofsa hijriitti ji’a saglaffaa irratti argama. Ramadaanni ji’a kabajamaa Qur’aanni itti bu’ee fi leylat-ul qadr (halkan ji’aa kuma caaltu) of keessaa kan qabudha. Jinni Ramadanaa ji’aa rahmataa, barakaa fi jaalalaati. Ji’a diinni ilma namaa kan ta’ee sheyxaanni itti hidhamuudha. Sheyxaanni waan hidhamuuf namoonni ibaadatti ka’u, wanta gaariitti fiigu. Read more
Gaa’ila Kee Baraaruf-kutaa 2
May 27, 2016 Sammubani Leave a comment
6. Sobuu fi wal amanuu dhiisu – Wal amanuu fi iftoominni bu’uura maatii tokkoti. Maatii tokko keessatti wal amanuu fi iftoominni yoo dhabamee, walitti bu’iinsaa fi addaan bittinaa’utu dhufa. Haadhaa fi abbaan yoo kan wal soban ta’an,ijjolleenis sobaa isaanirraa barachuun hawaasaa fi biyya irratti miidhaa guddaa dhaqabsiisu. Sobaan qabeenya ummataa saamu. Kana dhiisati qabeenya abbaa fi haadha ofii sobaan hatu. Read more
Gaa’ila kee Baraaruf-Kutaa 1
May 20, 2016 Sammubani One comment
Kaayyoon fuudha heeruma fedhii fooni guutu qofa osoo hin ta’in sanyii horachuu fi jireenya namaa itti fufsiisudha.Fuudhaa heerumni dhaabbata guddaa maatii, hawaasni,biyyi fi addunyaan ittiin ijaaramaniidha. Hundeen dhaabbata kanaa yoo hin tolin,maatii qofa osoo hin ta’in hawaasni fi biyyi ni diigama. Ijoolle fi dubartoonni rakkoo garagaraatif saaxilamu. Wantoota dhaabbata kana diigan mee muraasa isaani haa ilaallu: Read more